သူတို့ ဘာလုပ်နေတာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သူတို့ ဘာလုပ်နေတာလဲ
Posted by moethuzar on May 1, 2012 in Buddhism, Science & Religion | 31 comments
ဗုဒ္ဒက အဲ့လို သင်သလား ဘုရား သားတော်တွေ
ကိုယ့်အပြုအမူ၊ကိုယ့် စိတ်ထားက ကိုယ့်သမိုင်းကိုရေး၊ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ခဲ့ကြတာ
မဟုတ်လား။သူများကို လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင် ကိုယ့်ဖက် သုံးချောင်းပြန်ထိုးမှာ မေ့နေ
တယ် ထင်ပါတယ်။၀ိုင်း ဆဲနေတာ၊ကိုယ့် အပြစ်ကိုယ်မှ မမြင်ကြဘဲလေ။သနားစရာ ထို
ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုးတက်တဲ့ခေတ်မှာ သတိထားစရာ ပါပဲ။ ကိုယ်မှားကိုယ်ခံ…ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ကျန်ကြ မှာမို့…အရာရာမှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြဖို့ ပြယုဂ်တစ်ခုပါပဲ
အဲလို လုပ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမဆို အရေးယူရမှာပါဗျာ။
မျှမျှတတ လေးဖြစ်သွား အောင် ဘာအကြောင်းကြောင့် အဲလို့ လုပ်သလဲဆိုတာလေးပါ ထည့်ရေးပါ။
တစ်ဘက်သက်တော့ မရေးပါနဲ့နှစ်ဘက်လုံးမှာ အမှားများစွာရှိခဲ့မှာပါ။
နောင်မဖြစ်အောင် နှစ်ဘက်လုံးက ပြင်စရာ ရှိတာတွေပြင်ကြဖို့ ဘဲ။
ခင်ဗျားတို့ ဘာသာဝင်တွေ ဘုန်းကြီးတွေ ကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက်တာ တွေ ဘာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဒါမျိုးတွေလည်း ရေးပါ။ နောင်မဖြစ်ရအောင်ပါ။
ဒါဟာ မတင်သင့်တဲ့ ပုံဘဲဗျာ။လူသားမှန်ရင် စိတ်လိုက်မာန်ပါ မှားတတ်စမြဲမို့ 
နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။အားလဲုးကိုယ်စီ အမှားတွေ မရှိခဲ့ဘူးလို့ မငြင်းနိုင်
ဘူးနော်။ဒီပို့ စ်ကို ဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့
နာနာ(သံတွဲ) or နာနာဘာဝ ရဲ့ Post တွေကို ၀င်လဲမကြည့်တော့ပါ…။ မန့်လဲ မမန့်တော့ပါ…။ Neglect နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းလိုက်သည်…..။
လုံးဝထောက်ခံပါသည်။ မကောင်းကင်ရေ ညီမရောပဲ။
ပဌာန်းတွေဘာတွေများတက်ရွတ်သလားလည်း မပြောတတ် :D :D :D
( ဗုဒ္ဓကအဲ့လိုသင်သလား )
ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာ သူတပါးဥစ္စာအစုကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုဘို့ဆိုတာမဆိုလင့်
( စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူတွေတွက် စည်းကမ်းကိုထုတ်ပြန်ရပါတယ် )
လူ တွေ ( ဘာသာပေါင်းစုံကကောင်တွေရော ဘာမှမဘာသာတဲ့ကောင်တွေရော )
တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့ တစ်နိုင်ငံ၏ စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်ခြင်းကို တစ်လောကလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်၍ မရနိုင်ဟု
စည်းကမ်းဖေါက်ပြီး အရက်သောက်တဲ့ အစ္စလမ်တွေ ရှိသလို
စည်းကမ်းဖေါက်ပြီး ဗရုတ်သုတ်ခ လုပ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်
ရံခါ သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားမှာ ကျိုးကြောင်းကိုမဆင်ခြင်ဘဲလျှက် မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်ခြင်း
pazflor ပြောသလိုပဲ မင်းဟာက ငါကြားဘူးတဲ့ စကားပုံလိုဖြစ်နေပြီ ဂဏန်း ညှပ်တာ လူမမြင်ဘူး
မိအေးအော်တာပဲ လူမြင်တယ်ဆိုသလိုပဲ ။ ကောင်းကင်ပြာပြောသလိုပဲ လုပ်ကြပါ အဲဒီ နာနာဘာဝ ကောင်ကို ။တစ်ခုရှိသေးတယ် အားလုံးလဲ သတိထားမိမယ် ထင်ပါတယ် ဒင်းက တင်သွားပြီး
နောက် ပြန်မကြည့်တော့ဘူး အမေးရှိ တာတွေကိုလဲ ပြန်ပြီး ရှင်းမပြနိုင်ဘူး ဆွေးနွေး တာလဲ မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကား ကျွန်တေ့ာ အထင် ဒါသက်သက် ရန်တိုက်ပေးနေ တာနဲ့ တူနေတယ် ။
ပုဆိုးထဲက လက်သီးပုန်း ပြနေသလိုပါပဲ ။ ယောင်္ကျားပဲ ကိုလုပ်ထားတာကို ယ် တာဝန် ယူရဲရမှာပေါ့ ။
အဲလို သောက်ခြောက်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရွာထဲ လာတာ ငါတို့ ရွာ နာတယ် ။
ဗြုန်းကနဲ ဝုန်းကနဲ ပေါ်လာပြီး ပြဿနာရှာ ရန်တိုက်ပေး
ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှု အသွင်ဆောင်ပြနေတာမို့
သဂျီးရေ ဖျက်ပြစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံး ထင်မိပါကြောင်း ။
အေးလေ..သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာပါလိမ့် …
I’ll settle this case by kaung kin pyar’s way.Well, ladies and gentlemen of MG let’s ignore this freaking moron who harrasse our religion.And as all of u know that he just want Myanmar people to fight with Muslim people.But as we all are Buddhism,we should ignore himand don’t listen to whatever he says and write.Oneday, he’ll have to pay for that and he deserve that.:<(
ခီများ ဘီလိုဖစ်နေတာလဲ တိန်ဆရာ တီချားဟာ ရှိဘူးလား
ခီများ အားရားနီရင် ခီများ ပျော့တဲ့ အန်အန်အခ်ျဝိုင်မာ တွားပျော
ကုလားဒိန်ကတော့ ကုလားကျင့် ကုလားကြံ ကြ့နေပြန်ဘီ။
ဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ အငြင်းအခုန်ဖြစ်ကြပြန်ပြီ။ ကျနော်လဲ ရေးတာမကြာသေးတဲ့ လူတယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ဒီဆိုဒ်ကစာတွေကို ဖတ်ကြည့်နေတာ တော်တော်ကိုကြာသွားပြီ။ ကျနော်စိတ်ထင် ဒီလိုပို့စ်မျိုး အရင်တုန်းက မဖတ်မိခဲ့ဘူးထင်တယ်။ နောက်ပြီး ဒီစာရေးသူကလဲ အခုရက်ပိုင်းလေးကမှ စပြီးရေးသူလို့ ထင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်အနေနဲ့ ရန်ဖြစ်ရုံစာကို တင်ပြီးမဆိုင်သလို ကြည့်နေလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ဘာကြောင့် ဒီလိုထင်တယ် သုံးသပ်တယ်ဆိုတာပါ ဖတ်ရှုသူများကို တတ်နိုင်သမျှ ထွက်ပြီး ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် တင်ရုံပဲတင်ပြီး မထွက်လာပါသလဲ ဆောင်းပါးရှင်ရေ။ ထွက်လာပြီး ခဏခဏ ရှင်းနေရင် ကိုယ့်ရဲ့နန်းဇာတိ အစစ်အမှန်တွေ ပေါ်ကုန်မှာစိုးလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ရှင်းမပြတတ်လို့လား။
မိတ်ဆွေတို့ရေ တခါတရံကျတော့ ဒီဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတို့ ဘာတို့ဆိုတာ အကြပ်အတည်းနဲ့ ကြုံလာတဲ့ အစိုးရတို့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေက အာရုံကိုလွှဲရအောင် လုပ်ကြတာဗျ။ ဒါမှ သူတို့ အနေချောင်မှာကိုး။ Boiler ကြီးကို မပေါက်ကွဲအောင် pressure လျှော့ပေးရတဲ့ safety valve ပေါ့ဗျာ။
တခါတလေကျတော့ တချိန်က လူမျိုးတမျိုးကို ကြမ်းတမ်းကြောက်မက်ဖွယ် စကားလုံးတွေ သုံးပြီး စွပ်စွဲခဲ့သူတွေကလဲ ဒီရေလှိုင်းကိုစီးပြီး မျိုးချစ်သူရဲကောင်းလိုလို အမြင်ကျယ်သူလိုလို ဟန်ဆောင်တတ်ကြတယ်။ ပြောတုန်းကတော့ ကျနော့်ကိုယ်ထဲက ဘာသွေးတွေကပြောနေလို့ ညာသွေးတွေက ပြောနေလို့ အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။
ကဲ အခုတော့ ဆောင်းပါးရှင် ထွက်မလာလို့ ကျနော်ကပဲ ရယ်စရာသဘောမျိုးနဲ့ ခေါ်ထုတ်ကြည့်မယ်။
ဥုံ အထက်မှာသကြား ငါကားဆရာ နာနာရုပ် မူရာမာယာတွေ သုံးပြီးဟန်လုပ်မနေနဲ့။ နင့်ဇာတိရုပ် အစစ်အမှန်ကို အခုထုတ်ပြစမ်းဟဲ့။ (ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ-နာနာရုပ် ဟန်လုပ်ပြီးရယ်သံ)
အဆောက်ဦးတွေရှိတယ် အစ္စလာန်ဘာသာ သာသနာပြုတာလက်ခံထားတယ်
အာဖဂန်နစ္စတန် ဆော်ဒီ အီဂျစ် ပါကစ္စတန် ဘင်္ဂလားဒေ့ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရော
ဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်ဦးတွေ သာသနာပြုတာတွေ ရှိပါသလား
Dear brother, ကိုရင်မောင်,
Here, Qatar, there is NO church allowed.
More than2Lakhs population who believed in Jesus Christ has to make their religious ( pray ) at small Office buildings as temporary Churches.
But only one Lord Buddha’s statute ( small ) is built in the compound of
SiriLankar Embassy ( Doha ).
Just FYI to be confirmed.
Now I am happy to come back home in next week.
သွေးပုတ်ပြည်ပုတ်များရှိခဲ့ရင်တော့ အနာသက်သာအောင် ဖောက်ထုတ်ပေးရပါတယ်။
သွေးပုပ် ပြည်ပုပ်ဆိုရင် ဖောက်ထုတ်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကတော့ အမှန်ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးရှင်ကို အထူးသံသယ ဖြစ်မိတာက ပို့စ်တွေကို တင်ရုံတင်ပြီး ထွက်မဖြေရှင်းတာပါ။ ကျနော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူဟာဒီပို့စ်ကို ဘာအကြောင်းကြောင့် ရေးတာလဲ သူဟာတကယ်ပဲ သူပြောသလို မူဆလင်ဘာသာဝင် ဟုတ်ရဲ့လား။ သူပြောနေတာတွေဟာ တကယ်ပဲ သူယုံကြည်တာတွေလား။ တမင် တဦးတယောက်ကများ ပြဿနာဖန်တီးချင်လို့လား။ တခြားအကြောင်းတွေ ရှိနေသလားပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အမျိုးတွေနဲ့ ဘာသာကိုစော်ကားလို့ကတော့ ဘယ်ခံလိမ့်မလဲဗျ။ တသက်မှာ ၁ခါမဟုတ်ပဲ ၂ ခါတောင်သေသွားအုံးမယ်။ ဟဲ ဟဲ နောက်တာပါ။ အဲဒီလောက်တော့ မကြမ်းပါဘူး။ ကြမ်းချင်လည်း ကြမ်းမယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောတာက မှားပြီးစွပ်စွဲမိမှာ စိုးလို့ပါ။
အဟိ မန်းဂဇက်ကြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာရေးအပုတ်ချတဲ့ site ကြီးဖြစ်လာဘီ။
အမှန်ဆို ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကို တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေမှာ တင်ထားပြီး လိုသလိုပြောပြီး
ပြန်လည်ဆွေးနွေးလို့မရအောင် ( ကွန်မန့်ပေးခွင့်မရအောင် ) လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်
အကျိုးရှိတယ်လို့တောင်ထင်မိပါတယ် ( မိမိတစ်ဦးတည်းအမြင် )
ဒါ့ကြောင့် အခြားဘာသာရေးတစ်ခုကို ဝေဖန်ရလောက်အောင်
မြင်သာလာမယ်ထင်မိတာပါဘဲ ( အထင်ပါ :D )
ယနေ့ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်လာရင် မိမိဘာသာတရားကိုတတ်သိနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့
( ကြားဘူးနားဝ :D )
( ကျုပ်တို့တွေရဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိ ကြားဖူးနားဝ
အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြမလား ဘုမသိဘမသိ ကိုက်ကြမလား :D )
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော. ဒီပို.စ်ကိုကန်.ကွက်ပါတယ် ။
တိုင်းပြည်အတွက် အရးတကြီးလုပ်ဆောင်စရာတွေရှိတဲ.အချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအရေမရ အဖတ်မရ ပို.စ်တွေ
နဲ.ရန်တိုက်ပေးပြီး ရှုတ်ထွေးအောင်လုပ်နေသလိုဘဲ ။ ဒီဓတ်ပုံကိုခန်.မှန်းမိပါတယ် ….ကျုပ်အထင်မမှား
ဘူးဆိုရင် …၂၀၀၁ ခုနှစ်က တောင်ငူမြို.မှာ ဖြစ်ခဲ.တဲ. ကုလားအရေးအခင်းပါဘဲ ။
နာနာဆိုတဲ.သူက တောင်ငူနဲ.ပတ်သက်ပါလိမ်.မယ် ။ သံတွဲဆိုတာ သံတွဲသားတွေကိုခုတုံးလုပ်တာပါ ။
ဒီဂေဇက်မှာ မင်းသခင်ဆိုတာ တောင်ငူကလို.ထင်ပါတယ် ။ဖတ်မိရင် ၀င်ပြောပေးဘို.ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
နာနာနဲ.တကွ တောင်ငူက မွတ်ဆလင်တွေကိုပြောချင်တာက
သင်္ဃန်းဝတ်ထားတိုင်း ရဟန်းသံဃာမဟုတ်ဘူး ။
ဒို.ဗုဒ္ဒက သူများပစ္စည်း ဖျက်ဆီးဖို.မဆိုထားနဲ. မြက် တစ်ပင်တောင်နှုတ်ဖို. ခွင်.မပြုဘူး ။
မင်းတို.ဗလီကိုဖျက်တာ အဲဒီတုန်းက အစိုးရကိုသွားမေးပါ ။
ဖျက်တယ်ဆိုတာ ဖျက်ရတဲ. အကြောင်းအရင်းရှိလို.ဆိုတာသဘောပေါက်ပါ ။
ဒါဟာ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်ဆိုတာ မြင်အောင်ကြည်.ပါ ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှုးရုံးထိုင်တဲ.နေရာနဲ.
(၁၀)မိုင်ကျော်လောက်သာဝေးတဲ.နေရာမှာ အရေးအခင်းကို (၃)ရက်နေမှ တားဆီးတာ ၊ အရေးအခင်း
အပြီးမှာ တိုင်းမှုးမပြုတ်ဘဲ မ ၀ တ ဥက္ကဌဘဲပြုတ်တာ မင်းတို.စဉ်းစားပါ ။
မင်းတို.ဘာသာ အကြောင်းကြိုက်သလိုအမွှန်းတင်ပါ ဒါပေမဲ. (ဗုဒ္ဒက အဲ.လိုသင်လား ၊ ဘုရားသားတော်
တွေ ) လို.ပြောပြီး မစော်ကားနဲ. ။
မင်းတို.ကိုမုန်း တယ်လို.ထင်ရင် အဲဒါ မင်းလိုကောင်တွေက မင်းလိုစော်ကားတတ်လို.ဆိုတာ
ဖတ်မိတဲ.ရွာသူ ရွာသား တွေကို မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ……
နောက်နောင် ဒီပို.စ်မျိုးတွေကို ၀င်မဖတ်ဘဲ ဆန္ဒ ပြကြပါစို. ။
MG ကိုဝင်ပြီးစော်ကားနေသလိုပါဘဲ ။
ပုံအမှန်အကန်ဆိုရင် ပြသနာ မရှိပါဘူး.. တင်ကောင်းပါဒယ်..။ ကိုယ်ပိုင်လား တနေရာရာဂ ယူလာသလား ဓာတ်ပုံရင်းမြစ်နဲ့ အခင်းဖြစ်ပွားရာ ဒေသဂိုဒေါ့ ဖော်ပြဖို့သင့်ဒယ်။ ပို့စ်တင်သူ ကိုယ်နှိုက်ကလည်း ဖွလိုသူဖြစ်တာမို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆဲဆိုတုံ့ပြန်နိုင်ဂျပါဂျောင်း….။
အေဘေး ဘင်လာဒင်.. ဆဲဒယ်ကွာ -ီးဖြစ်လား…။
နာနာရေ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေတင်ရင် ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုယ်ရေးတဲ့စာသားတွေကို သတိပြုပေးစေချင် တယ်. အပြုသဘောဆောင်စေချင်တယ်။ အဖြစ်အပျက်ဆိုတာ တင်ရမှာပဲ။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ကာလ၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ် ဆိုတာလေး ရေးစေချင်တာပါ။ ခုချိန်မှာ နိုင်ငံတော်က အကောင်းဘက်ဦးတည်နေချိန်မှာ ဆူပူမှုမျိုး မဖြစ်အောင် media တွေအနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်။
ဒါဟာ ၇ည်၇ွယ်ချက်ရှိရှိ တင်တဲ့ post လို.မြင်ပါတယ်.. ဆူပူစေလို အဓိကရုန်းဖြစ်စေလိုတဲ့ သဘောလို. မြင်ပါတယ်.. ဒီပို.စ်တင်တဲ့သူကို လုံးဝရှုတ်ချတယ်.. တလောကလုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ..
စေတနာနဲ့ ဆေးအသစ်သုတ်ပေးနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော ။
ဒီနေရာမှာလည်း ဒီပုံ ကို တွေ့ရတယ် …..
ဖတ်ဖူးသမျှ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ ဘုရားအလောင်းတွေဟာ
တိရစ္ဆာန် ဖြစ်နေတာတောင် သင်္ကန်းကို ရိုသေလို့
အသတ်ကို လုယက်မယ့် လူဆိုးကိုတောင် ရန်မူခြင်း မလျဉ်းမရှိခဲ့ပါဘူး …
Nay Lin Htoo says:
ပုံမှာ လတ်တလော အရေးနှင့်လုံးဝမပက်သက်ပါ…တကယ့် ပုံအမှန်က ၃၀.၄.၂၀၀၉ နေ့စွဲနဲ့ Burma Youth Islamic Center က ဦးသန်းရွှေဆီကို လိပ်မူပြီး ပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာက ပုံဖြစ်ပါတယ်.. ကရင်ပြည်နယ် အရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ပေးပို့ထားတဲ့စာပါ.. Burma Youth Islamic Center ရဲ့ အဆိုကလဲ အခု နာနာသံတွဲ ရေးသားထားသလို မဟုတ်ပါဘူး.. ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ သက္ကင်္န်းဝတ်တွေဟာ စစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးက လူတွေလို့တင်ပြထားတာပါ.. စစ်တပ်ကထုတ်ပေးတဲ့ အတွင်းခံတွေဝတ်ထားတာတွေ့ပြီး ထောက်လှမ်းရေးတပ်ကိုသာ ထုတ်ပေးတဲ့ စကားပြောစက်မျိုးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်လို့ ပြောထားတာပါ.. အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကို အမေရိကန် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့လဲ ဖေါ်ပြထားပါတယ်. တစ်ချို့မှာဆိုရင် ပစ္စတို သေနပ်တွေပါ သယ်ဆောင်ထားကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်.. Burma Youth Islamic Center ရဲ့ သဘောဟာလဲ ထိုစဉ်ကတည်းက ဘေးဝင်နှောက်ယှက်ပြီး ဘာသာရေးအထိကရုဏ်းအသွင်ဖြစ်အောင် ကြံစည်တယ်လို့ ပြောချင်တဲ့ သဘောပါပဲ.. အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ လိပ်စာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်.. http://burmayoungislamiccenter.blogspot.com/2009/11/reporting-about-problem-related-to.html မန္တလေးဂေဇက် မှာ နာနာ ရေးသားထားတဲ့ စာတွေကိုတော့ သူ့ခံစားချက် သူ့ခံယူချက်နဲ့သူမို့ မပြောလိုသော်လည်း.. အခုလို အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ အထင်အမြင်မှားစေလိုတဲ့ သဘောနဲ့ တင်တဲ့ပုံတွေကိုတော့ ကန့်ကွက်ပါတယ်.. ဘာသာရေးလူမျိုးရေး သင့်မြတ်လိုတယ်ဆိုရင် ဆင်ချင်သင့်ပါတယ် မန္တလေး ဂေဇက်က Admin များကလဲ ဒီလို အချိန်မှာ သေခြာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်.. ကိုယ့်သတင်းစာ လူဖတ်များရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ သဘောမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ကပြန်ပြီး ဆရာလုပ်စရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး.. .
နေလင်းထူး အမြင်ကို မှန်တယ် ထင်နေရင် လဲသေပေါ့။နားအေးတယ် လေ။
နည်းနည်းတည်ငြိမ်လာစ.. ဒီလိုအချိန်မှာ.. ပို့စ်အဟောင်းတွေပြန်မဖွစေလိုကြောင်းပါ…။
အခြေအနေ..အချိန်အခါကို.. သတိထားစေလိုပါကြောင်း… :harr:
ဒီနေရာမှာတော့ ရှားရှားပါးပါး သူကြီးနဲ့ ကျုပ်က သဘောထားတူသွားပြန်ပြီ။ ဘယ်သူမှ ဝင်မပြောကြပါနဲ့။ ဒီပို့စ်က တော်တော့်ကို ကြာလှပါပြီ။ အခုမှ တခါပြန် ထွက်လာတာပါ။ ပြဿနာ ဖြစ်အောင်ပါ။
ကိုစံလှကြီး …. မပြောနဲ့ ဆိုပေမယ့် .. အတော်လေး ချုပ်တီးထားတာတောင် ရင်ထဲ မကောင်းလို့ ၀င်ပြောပါဦးမယ် …
သဂျီးအနေနဲ့ … ဘယ်လိုပြသနာမျိုးကို ရည်ညွှန်းနေပြီလဲလို့ … ရိပ်မိပါလျှက် … အက်ရှင်မယူပဲ .. ကော့မန့်တကြောင်းနဲ့ တားမြစ်တာတော့ … သိပ်မထိရောက်ဘူး လို့ မြင်မိပါတယ် ။
ဒီပို့စ်ကို …. ကော့မန့်ပိတ်သင့်ပါတယ် … ဒါမှမဟုတ် …. ပို့စ်ဖျက်သင့်ပါတယ် … ။ :om: